एक अपरिचित ब्यक्ति टा,उको फु,टेर अ,चेत अवस्थामा फेला, चिन्नु हुनेले आफन्त सम्म सेयर गरि पुर्याउनु होला। – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/एक अपरिचित ब्यक्ति टा,उको फु,टेर अ,चेत अवस्थामा फेला, चिन्नु हुनेले आफन्त सम्म सेयर गरि पुर्याउनु होला।
उहाँको नाम थाहाछैन । सायद भोकले हुनुपर्छ, जावलाखेलमा २ बजे आसपास उहाँको टाउको नरिवल फुटेजस्तै आवाजमा बजारिएपछी उहाँ अचेत हुनुभयो । उहाँलाई हामीले अल्का हस्पिटलमा ल्यायौ । तर उहाँको आफन्त कोही नभएपछी उहाँको उपचार गराउने मान्छे कोहि छैन ।
अहिले प्रहरी बेवास्ता गरिरहेको छ । उहाँले दुईपटक भमिट गर्नुभयो । टाउकोबाट निकै र, ग, त बगिसकेको छ । अल्का का अनुसार उहाँको MRI गरेर ICU मा नै राख्नुपर्छ । नत्रभने जे पनि हुनसक्छ । उहाँ नाम/ठेगाना बताउन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न । प्रहरी भने एकछिन त्यत्तिकै राख्नु उठेर हिड्छ भन्दैछन ।
प्रहरी अस्पताल लगेर उपचार गर्नुस भन्दा प्रहरी त्यहाँ गर्न मिल्दैन भन्छन । अब उसको उपचार कसले गर्छ ?
यदि उसको आफन्त कोही छैन भने यो मानिस राज्यको दायित्व हो या हैन ? Please share so that it could reach to his family. उनको बारेमा वरिपरि बुझ्दा दैनिक ज्यालामजदुरीमा काम गर्ने मानिस हुनुहुन्छ । यसबेला हो हामीलाई राज्यको उपस्थिती चाहिने । कहाँ छ राज्य ?